Global Voices teny Malagasy » Manamarika ny kihon-dalana eo amin’ny fiarahamonina Rosiana ny fisamborana an’ilay mpanao gazety fanadihadiana Ivan Golunov · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jona 2019 12:57 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Noubel Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Ivan Golunov, izaho sy isika (rehetra). Afisy avy amin'i Meduza, nahazoana alalana
Точка кипения: midika hoe fotoana mangotrakotraka ity teny Rosiana ity—rehefa tonga ny fotoana hoe ampy tena ampy izay—izay angamba ny fomba tsara indrindra hilazana ny fahatsapan'ny Rosiana marobe momba ny fisamborana an'i Ivan Golunov. Notanana ny 6 Jona tao Moskoa i Golunov, mpanao gazety mpanao fanadihadiana malaza, noho ny fiampangana namboarimboarina  ho mitana sy mivarotra zava-mahadomelina an-tsokosoko
Voasambotra i Golunov ary tsy nahazo alalana haka mpisolovava tamin'ny voalohany, izay fanitsakitsahana ny lalàna Rosiana. Nanamafy ny mpisolovavany fa naratra mafy izy nandritra ny fitànana azy tany am-ponja . Navoaka izy taorian'ny nitondrana azy tany amin'ny hopitaly, ary nambenana tao an-tranony tamin'ny 8 Jona.
Namoaka ny sarin'ny laboratoaran'ny zava-mahadomelina izay voalaza fa hita rehefa nikaroka tao an-tranon'i Golulov ny polisy Rosiana tany am-boalohany, saingy nesorina ny sary taty aoriana. Nanamafy  ihany koa ny sehatra famoaham-baovao Rosiana mpanohana an'i Kremlin Russia Today fa tsy tao an-tranon'i Golunov ny sary no nalaina. Mety hitarika ho amin'ny fanamelohana an-tranomaizina 10 ka hatramin'ny 20 taona ny fiampangana an'i Golunov
Miasa ao amin'ny Meduza , iray amin'ireo sehatra fampitam-baovao tsy miankina amin'ny aterineto amin'ny teny Rosiana sisa tavela i Golunov, enina amby telopolo taona. Any amin'ny manodidina an'i Litoania no voasoratra anarana ny Meduza, saingy any Moskoa no misy ny biraony sy ireo mpanao gazety marobe. Nitarika sy namoaka fanadihadiana marobe miresaka momba ny trangana kolikoly nahavoarohirohy manampahefana ambony i Golunov .
Hatramin'ny nisamborana an'i Golunov, namoaka ny lahatsoratr'i Golunov teo ambanin'ny lisansa Creative Commons  ny Meduza ary nandrisika ny sehatra fampahalalam-baovao sy ny olon-tsotra mba hamerina hamoaka ny tantara navoakany, hetsika izay nahazo fanohanana feno avy amin'ny Global Voices. Ao anatin'ireo tatitra manan-danja indrindra nataony ireo izay nitantara tamin'ny antsipiriany ny nanomezan'ny ben'ny tanàna lefitra Pyotr Biryukov  iray manontolo ny fifanarahana ara-panjakana ho an'ny fianakaviany, sy momba ny tetibola mihoapapana  tamin'ny fandaharan'asa fanatsarana an-drenivohitra tao Moskoa. Mifantoka amin'ny ampihimamba natao tamin'ny sampan-draharaha mikarakara ny fandevenana  ao Moskoa ny lahatsoratra izay niasany taloha kelin'ny nisamborana azy .
Nahatonga fanehoam-piraisankina tsy fahita firy teo anivon'ireo mpanao gazety, mpikatroka ary mpisolovava, fa tao ihany koa ireo mpilalao sarimihetsika, mpihira malaza, ary olo-malaza avy any ivelan'ny tontolo liberaly ao Moskoa sy Saint-Petersburg ny fisamborana an'i Golunov. Nanaiky ny hamoahana lahatsoratra miaraka amin'ny lohatenin-gazety mitovy  ireo gazety telo lehibe tamin'ny 10 Jona ho fanohanana an'i Golunov. Vetivety tsy nisy toy izay  dia tapitra ireo gazety. Nangataka ny hisian'ny fanadihadiana ara-drariny ihany koa ny fampitam-baovao manohana an'i Kremlin, anisan'izany ny Channel One , ny fantsom-pahitalavitra be mpijery ao Rosia tao anatin'ny fiverenan-dalana somary maneso.
Nanamarika ny Andron'i Rosia  ny 12 Jona, rehefa nankatoavin'ny manampahefana tao an-toerana ny hanaovana ny diaben'ny vahoaka sy ny fihetsiketsehana (Mila fahazoan-dàlana ny fihetsiketseham-bahoaka araka ny lalàna Rosiana). Nanambara ireo mpanohana an'i Golunov fa hanohy ny diabeny manokana  izy ireo na tsy mahazo alalana ofisialy  aza .
Nilaza ireo mpanara-maso ao Kremlin fa mikasa ny hamaha ny olana ny governemanta Rosiana, izany hoe hanaisotra ny fiampangana ilay mpanao gazety mialoha ny 20 Jona . Amin'io andro io, hampiantrano ny “Direct Line “, ilay fandaharana resadresaka an-tserasera isan-taona hifanaovany amin'ny olom-pirenena ny Filoha Vladimir Putin, izay nihen-danja amin'ny endrika manan-tantara  ny lazany tao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/18/140216/
 fiampangana namboarimboarina: https://www.themoscowtimes.com/2019/06/10/why-the-arrest-of-an-investigative-journalist-should-worry-everyone-a65944
 naratra mafy izy nandritra ny fitànana azy tany am-ponja: https://www.theguardian.com/world/2019/jun/08/russian-journalist-ivan-golunov-beaten-by-police-in-custody
 fanamelohana an-tranomaizina 10 ka hatramin'ny 20 taona : https://www.themoscowtimes.com/2019/06/08/russian-anti-corruption-reporter-charged-with-drug-trafficking-a65934
 lahatsoratr'i Golunov teo ambanin'ny lisansa Creative Commons: https://meduza.io/en/feature/2019/06/09/support-ivan-golunov-by-republishing-his-work?fbclid=IwAR3c0y2VlB8JgBOxWu_YwzvaVSpbQa79ShNIxk0k1eeNJuHSmGOSzeJK2dU
 tetibola mihoapapana: https://meduza.io/en/feature/2019/04/25/a-roughly-painted-cheap-fake
 ampihimamba natao tamin'ny sampan-draharaha mikarakara ny fandevenana: https://www.theguardian.com/world/2019/jun/10/russian-papers-join-forces-in-solidarity-with-detained-journalist-ivan-golunov
 lohatenin-gazety mitovy: https://www.themoscowtimes.com/2019/06/10/3-russian-papers-publish-identical-front-pages-in-support-of-arrested-journalist-a65936
 Vetivety tsy nisy toy izay: https://www.colta.ru/articles/society/21485-golunov-tochka-kipeniya?fbclid=IwAR3fzwlZsxCHabO995Y8XeboSw4jzRjJw5IONVL0bkuGTtVirHzIGV3D4WU
 Andron'i Rosia: https://en.wikipedia.org/wiki/Russia_Day
 diabeny manokana: https://www.facebook.com/events/1032905246919446/
 alalana ofisialy: https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_assembly_in_Russia
 mialoha ny 20 Jona: https://www.proekt.media/article/kreml-za-golunova/
 nihen-danja amin'ny endrika manan-tantara: https://www.aljazeera.com/news/2019/01/poll-shows-russia-trust-putin-falls-time-190122184309853.html